"Waan Ka Mahadnaqayaa Inaan Ka Fogaaday Real Madrid, Riyadeyda Ayaan Rumeeyay Bedelkii Aan Qarow Ku Jiri Lahaa" - Gool24.Net
“Waan Ka Mahadnaqayaa Inaan Ka Fogaaday Real Madrid, Riyadeyda Ayaan Rumeeyay Bedelkii Aan Qarow Ku Jiri Lahaa”
Dani Alves ayaa wareysi siiyay ESPN waxaana uu kaga hadlay waayihiisa hore iyo kan haatan waxa uu sidoo kale kaga hadlay Barcelona iyo Real Madrid.
Mar uu ka hadlayay inuu ku biiri lahaa Real Madrid waxa uu yiri: “Waan ka mahadnaqayaa inaan ka fogaaday Real Madrid, riyadeyda ayaan rumeeyay markii aan Barcelona ku biiray bedelkii aan qarow ku jiri lahaa.”
Isagoo ka hadlayay la shaqeynta Pep Guardiola: “Wax dhibaato ah kama sheegan karo Pep, kaliya hal mar ayaa isqilaafnay, waana ka wada hadalnay, waana xalinay isbuuc ka dib. Aniga ahaan taas ayaa ii ah waxa ugu muhiimsan ee Pep Guardiola, waxa uu go’aan ku gaaraa wax qalbigiisa ku jira, waxaana uu qaadan karaa go’aamada ugu fiican. Waa qof jecel inuu wax walba u sameeyo sida ugu fiican. Mararka qaar waxa uu isku dayaa inuu hal talaabo gadaal u dego si uusan u guuldareysan. Sannadkeenii ugu danbeeyay ma uusan dareemeynin kaslooni wuxuuna qaatay inuu baxo.”
Isagoo ka hadlayay Neymar iyo hadii uu ku faraxsan yahay PSG: “Waxa uu ku jiraa waqti kala-guur ah, sababto ah ma helayo natiijooyinkii uu rabay, taas ayuuna si weyn ugu waalan yahay. Wuxuu doonayaa inuu mar walba joogo meesha ugu sareysa.
‘Sidaasi darteed haddii uusan guuleysanin waa ay iska cadahay murugadiisa. Waa inaad fasax qaadato oo aad dib u eegto waxa kaa dhigi kara xiddiga ugu muhiimsan. Waali ayuu dareemi lahaa haddii uu ku faraxsanaan lahaa guul la’aan ah.”
Miyuu Neymar sii joogayaa PSG?” “Casho ayaan sharad ku dhigan lahaa laakiin wax weyn ma ahan, miyaan sharad ku galaa Eiffel Tower? Waxaan qabaa inuu sii joogi doono PSG.”
Macquul ma tahay in Neymar uu ku laabto Barcelona: “Waxaan qabaa inay adag tahay, dadka Barcelona jooga ma doonayaan inay aqbalaan inay u baahan yihiin isaga, waana taas dhibaatada. Kibirka iyo islaweynida meel laguma gaaro, laakiin waa dhibaatada heysata Barcelona, mana oga inay u baahan yihiin isaga. Kooxdeen u baahneyn Neymar, cid walba ayaa u baahan Neymar.”